DHEGEYSO-Lixdan jir lagu diley deegaanka Ceel-xabley ee G.Bari. – Radio Daljir
Luulyo 12, 2016 12:17 b 0
(July 12 2016)-Wararka ka imaanaya deegaanka ceelxabley ee gobolka bari ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay hal qof kadib markii kooxo hubeysan ay jidka ugaleen niman safar ahaa oo halkaas marayey.
Ninka la dilay oo ahaa oday da’ ah ayaa kamid ahaa afar nin oo socdaal ah kuwaasoo usocday deegaanka albaraka ee gobolka bari, iyadoo intii wada ay ku safrayeyn ay istaajiyeen kooxo hubeysan kadibna ay ay dileen ninkas iyadoo ragii lasocday ay goobta ka carareen.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu horeysay oo muddo sanad ah kadib halkaas ka dhacda tan iyo intii la heshiisiiyey labada dhinac ee deegaankaas wada dega.
Hadaba Nabadon Salaad Siciid Qeybdiid oo kamid ah odayaasha deegaankaas ayaa arrimahaasi kaga hadlay waraysi uu siiyey Idaacadda Daljir, waxaana lahadlay Aamina Ladan Axmed.
DHEGEYSO-Wajiga labaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo habeenkii 3aad galay.